लक्ष्मी बैंकको एकैसाथ पाचँ नयाँ शाखा स्थापना
लक्ष्मी बैंकले आफ्नो शाखा संजालविस्तार गर्ने क्रममा एकैदिन पाँच शाखा खोलेको छ । बैंकले सोलुखुम्बुको थुलुङ्ग दुधकोसि, ताप्लेजुङ्गको पाथीभारा याङ्गवारक गाउँपालीका र सिधिङ्गवा गाउँपालीका, सुर्खेतको चौकुने र रुकुमको बाँफीकोटमा आफ्नो ५ नयाँ शाखा संचालनमा ल्याएको हो ।
यस नयाँशाखापछि लक्ष्मी बैंकको ४६ जिल्लामा शाखा संजाल ९४, ३ हस्पिटल सेवा काउन्टर, १०४ ए टि एम, २५०० भन्दा बढि रेमिटेन्स्, ५१ शाखा रहित बैंकिङ्ग र ४०० भन्दा बढि मोबाईल एजेन्टहरु पुगेको छ । यी शाखाहरुका साथ लक्ष्मी बैंकले आफ्नो सेवाअझ सुदृढ अनिव्यापक बनाउने विश्वास राखेको छ ।
यस शाखाको विस्तार सँगै बैंकले ग्राहकहरुलाई उनीहरुकै रोजाईको माध्यम अर्थात शाखा कार्यालय, इन्टरनेट बैंकिङ्ग र मोवाईल फोन मार्फत बैंकिङ्ग सेवाप्रादन गरी शहरी तथाअर्ध शहरी क्षेत्रमा आफ्नो ब्राण्ड ग्राहक अनुभवलाई अझ सशक्त पार्ने नीतिअनुरुप महत्वपूर्ण फड्को मार्ने विश्वास लिएको छ ।
आ व २०७३/७४मा रु ५९.३२ अरब निक्षेप र रु. ५२.७३ अरब कर्जा पु¥याएको यस बैंकको वासलातको आकार रु. ७०.९० अरब रहेको छ । सोहि आ.व.मा बैंकले १०० करोडको हाराहारीमा खुद मुनाफाआर्जन गर्न सफलभएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २७ प्रतिशतले बढी हो । यसका साथ साथै संपूर्ण वित्तीय सूचकहरु नियामक व्यवस्थाअनुरुपनै राम्रो अवस्थामा रहनुका साथै भविष्यको लागि उत्साहजनक रुपमा रहेका छन् ।
सुविधाजनक नयाँ निक्षेप योजनाहरु र विभिन्न आवधि तथा बचत निक्षेप सेवाहरुका साथसाथै व्यक्ती गत साना व्यवसाय कर्जा सेवाहरु प्रदान गरी व्यक्तीगततथा साना व्यवसाय बैंकिङ्ग सेवाको दायरा लई फराकिलो पार्दै जाने लक्ष्य बैंकले लिएको छ । विशेष गरी साना व्यवसाय कर्जा र व्यवसायिक कृषि क्षेत्रमा बैंकले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ । जस अनुरुप देशका विभिन्न क्षेत्रका सानातथा लघु उद्यमी तथा कृषकहरुलाई सरल रुपमाकर्जा प्रवाहगर्नुका साथै वित्तीय सेवा सल्लाह प्रदान गरी उनीहरुको व्यवसाय प्रवद्र्धन वित्तीय व्यवस्थापन कार्यमा ठूलो मद्दत पु¥याएको छ ।
आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर, हेर्नुहोस् कुन घट्यो कुन बढ्यो त ?
३१ असार, काठमाण्डौं । आजको बजारमा विदेशी मुद्राको भाउ यसप्रकार…
महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ढकालले गरे आफ्नो उम्मेद्वारी घोषणा
३० असार, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न…
सेयर कारोबार नेप्से झिनो अंकले उकालो लाग्दा, कसले कति कमाए
सोमबार उकालो लागेको सुनको मूल्य आज तल झर्यो, कति छ आज प्रतितोला ?